पाँचथर । घर–आँगनमै अकबरे खुर्सानीका बोटहरू, बारीहरूमा कतै नयाँ बिरुवाको तयारी, कतै लटरम्म फल्दै गरेका त केही ठाउँमा टिपेर बजार पुर्‍याउने चटारो । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–४ चिलिङदिन पुग्ने जो कसैले देख्ने दृश्य हुन् यी । यसले चिलिङदिनलाई ‘अकबरे गाउँ’ मात्र बनाएको छैन, सिंगो पाँचथरलाई नै अकबरे खुर्सानी पाइने जिल्लाको रूपमा परिचित गराएको छ ।
अकबरे खुर्सानी उत्पादनका लागि उक्त गाउँ नमूना बनेको छ । अकबरे यहाँका बासिन्दाको जीविकोपार्जन मात्र नभई आम्दानीको भरपर्दो स्रोतसमेत हो । उत्पादित खुर्सानीका साथै त्यसको बीउ र बिरुवासमेत बेचेर उनीहरूले वार्षिक लाखौं कमाउँदै आएका छन् । अकबरे खेतीमा उनीहरूको यो सफलता देखेर आसपासका गाउँका साथै छिमेकी जिल्लाका कृषकसमेत आकर्षित भएका छन् ।
अकबरे खुर्सानीको व्यापारको चिलिङदिनका स्थानीयको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसबाट हुने कमाइले सजिलै घरखर्च धान्नुका साथै उनीहरूले बचत समेत गर्दै आएका छन् । आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएपछि यहाँका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रा विद्यालयमा पढाएका छन् ।
यसरी बन्यो ‘खुर्सानीको गाउँ’
चिलिङदिनमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती शुरू गरेको १० वर्षभन्दा बढी भयो । उत्पादित खुर्सानी स्थानीयस्तरमा खपत हुनुका साथै इलाम र पाँचथरको सीमावर्ती राँके बजारसम्म विक्री हुन थाल्यो । यस्तैमा राँके बजार आइपुग्ने झापा, मोरङ, धरान, काठमाडौं लगायत शहर र भारतका सिलिगुडी तथा दार्जिलिङसम्मका मानिसले कोसेलीको रूपमा लैजान थाले । उत्पादनले राम्रो बजार पाएर हौसिएका चिलिङदिनकै ज्यामिरे टोलका किसानले यो खेती बृहत्तर बनाउने सोच बनाए । त्यसपछि त उनीहरूले विगतमा मकै र कोदा लगाउँदै आएका जग्गामा समेत अकबरे खेती गरे ।
उत्पादन बढ्दै गए पनि उनीहरूलाई बजारको कमी भएन । त्यसताका नेपाल सरकारले पनि ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ नीति अवलम्बन गर्दै थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरमा बसेको कृषि समितिको बैठकमा सहभागी कृषकले अकबरे खुर्सानीको खेती प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै चिलिङदिनलाई अकबरे गाउँकै रूपमा विस्तार गर्न प्रस्ताव गरे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघको साझेदारीमा चिलिङदिनमा ‘एक गाउँ, एक उत्पादन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा आयो । यसपछि अकबरेको खेती विस्तार तीव्ररूपमा बढेको छ । यो खेतीको अगुवाइ तारावीर नेम्वाङ, टीका नेम्वाङ लगायतले गरिरहेका छन् । चिलिङदिनका सबै कृषिकले आ–आफ्ना जग्गा र करेसाबारीमा अकबरे रोपेका छन् ।
५० समूह सक्रिय, ५० मेट्रिक टन उत्पादन
कृषि विकास कार्यालय, पाँचथरको तथ्यांकअनुसार चिलिङदिनमा ठूला–साना गरी करीब ५० कृषक समूह अकबरे खेतीमा सक्रिय छन् । अहिले यहाँका ४०७ जना किसानले यसको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छन् । गाउँबाट वार्षिक ५० मेट्रिकटन भन्दा धेरै खुर्सानी उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादित खुर्सानी इलाम, झापा, दार्जिलिङ, सिलिगुडी, काठमाडौं हुँदै सिंगापुर र हङकङसम्म पुग्ने कृषकहरू बताउँछन् । यो खुर्सानी गाउँमै प्रतिकिलो रू. २ सयसम्ममा विक्री हुने गरेको छ । सुकेको, अचार बनाएर बट्टामा राखेको र प्रशोधित खुर्सानी भने गुणस्तर हेरेर प्रतिकिलो रू. ७ सयसम्ममा विक्री हुन्छ । अब पालिकाका अन्य वडामा पनि सम्भावना अध्ययन गरेर यसको खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष देवित्राकुमारी आङदेम्बेले बताइन् । ‘एक गाउँ, एक उत्पादनकै रणनीतिमार्फत पालिकालाई समृद्ध बनाउने सम्भावना खोज्दै छौं, उनले भनिन् ।
चिलिङदिनमा भएका सार्वजनिक कार्यक्रमका अतिथिलाई यहाँका स्थानीयले कोसेलीस्वरूप अकबरे खुर्सानी नै दिने गरेका छन् । अधिक पिरो र अग्र्यानिक भएकै कारण यहाँको खुर्सानी आन्तरिक पर्यटकले पनि कोसेलीको रूपमा लैजाने गरेका छन् । तर खुर्सानी बालीमा नयाँ रोगकीराल उत्पादनमा समस्या हुन थालेको कृषकहरूको गुनासो छ । पछिल्लो समय अकबरेको बिरुवादेखि नै रोग देखिनुका साथै उत्पादन घटेको उनीहरू बताउँछन् ।
शुरू भयो विक्री सिजन
यो वर्ष उत्पादित अकबरे खुर्सानीको विक्री सिजन शुरू भएको छ । स्थानीय सहकारी संस्था तथा व्यापारीमार्फत बजारमा अकबरे आउने थालेको छ । विशेषगरी पाँचथर र इलामको सीमावर्ती बजार राँकेमा यसलाई विक्रीका लागि राखिन्छ । मेची राजमार्गले छोएका बजारमा दैनिक रू. १ लाखभन्दा बढीको खुर्सानी किनबेच हुने गरेको स्थानीय व्यवसायीको भनाइ छ ।